Mootummaa Oromoof ittisa ta’u dhaabbachuun dirqama; ilmaan keenya nu jalatti ajjeesuun kan dhaabbatu YEROO sana qofaa dha! Wareegamtoota keenya yoomiyyuu hin dagannu!! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsMootummaa Oromoof ittisa ta’u dhaabbachuun dirqama; ilmaan keenya nu jalatti ajjeesuun kan dhaabbatu YEROO sana qofaa dha! Wareegamtoota keenya yoomiyyuu hin dagannu!!
Mootummaa Oromoof ittisa ta’u dhaabbachuun dirqama; ilmaan keenya nu jalatti ajjeesuun kan dhaabbatu YEROO sana qofaa dha! Wareegamtoota keenya yoomiyyuu hin dagannu!!
Mootummaa Oromoof ittisa ta’u dhaabbachuun dirqama; ilmaan keenya nu jalatti ajjeesuun kan dhaabbatu #YEROO sana qofaa dha! Wareegamtoota keenya yoomiyyuu hin dagannu!!
Ambo lafa sochoosaa jira yeroo ammaa
Waanan Laammaa Magarsaa jaalladhuuf, Lammaan #Fakkeessituu akka koloneelattii kanaa miti. Utuu jennuu jechi #Miriixee jedhu maalidhaa?
Barattootni Oromoo Yuunivarsiitii #Jimmaa gadda isaanii ibsatan.
Barattoonnu kunneen huccuu gurraacha uffachuun gochaa suukaneessaa barattoota Oromoo irratti Yuunivasiitota Naannoo Amaaratti raawwatame yaadataniiru.
Mootummaa Oromoof ittisa ta’u dhaabbachuun dirqama; ilmaan keenya nu jalatti ajjeesuun kan dhaabbatu #YEROO sana qofaa dha!Wareegamtoota keenya yoomiyyuu hin dagannu!!
ABOn filannichaaf qophii taasisaa jiraachuu beeksise. Addi Bilisummaa Oromoo (ABOn) filannoo baranaatiif qophii barbaachisu taasisaa jiraachuu ibse.Hayyuu dureen addichaa, Jaal Daawud Ibsaa gaafdeebii dheengadda Dhaabbata Pireesii Itoophiyaa wajjin taasisaniin filannoorratti hirmaachuuf Boordii Filannoo Biyyaalessaa Itoophiyaarraa waraqaa ragaa argachuusaanii beeksisaniiru.
Ji’oonni saddeetii ol yeroo qophii ta’uu utuu malanii rakkoo bakkeewwan addaaddaatti dhaabicharra qaqqabeen hojiilee hanga yoonaa xumuruu qaban akka hinxumurre himaniiru. Akka hayyu dureen kun ibsanitti, yeroo qabanitti haalaan fayyadamuuf qophii imaammatawwan qabatanii dhihaatan xumuruurratti argamu.
Bakkeewwan addaddaatti leenjii leenjistootaa kennaa jirachuu, morkattoota biroo wajjin hojjechuuf waliigaltee taasisuufi kkf raawwachaa jiraachuu eeranii, dimshaashumatti hojiilee kanaan dura xumuruu qaban amma eegalaa jiraachuus addeessaniiru.
Addichi humna qabu hunda duguugee fayyadamuun filannoo baranaarratti hirmaata malee ejennoo filannoon haa dheeratu jedhu akka hinqabne kan himan Jaal Daawud, kana jechuun ADWUI waggoota 27 rakkoolee garagaraatiin biyyattii bulchaa ture ammas itti haa fufu jedhanii beekamtii kennuu waan ta’eef guyyaadhumasaa eeganii adeemsisuutu murteessaadha jedhu.
Developmental state vs Prosperity party ! Miilla abbaa fi ilmaa muran walduraa duuba!
Minilik morma,armaa fi harka mure, ormi akkasitti duudhaa abbaa isaa itti fufsiifate! Kana booda wal hin komannu dhalooti miilli irraa ciccitu kun ilaalcha hin taanee fi biyya isaaf hin taane ofirraa muree biyya walaba ijaarrachuuf mirga qaba!
Kora ABO magaala Amboo: Addi Bilisummaa Oromoo ABO’n Oromiyaatti sagantaa marii uummata waliin gaggeeffataa jira, danqaanis ABO mudate
ምርጫ ከተደረገ በሶማሌ ክልል 78% ድምፅ ያሸንፋል ተብሎ የሚታመነው የኦጋዴን ብሄራዊ ነፃነት ግምባር ( ኦብነግ/ONLF) ነው፡፡